Ungakhathazeki nge-Villa Sea Happy - Inhliziyo u-Manuel Antonio
Quepos, Costa Rica, Provincia de Puntarenas, i-Costa Rica
Indawo Yendawo! Lona umphakathi ozimele onesango lezindlu ezi-4 ezitholakala ncamashi phakathi kwepaki yesizwe iManuel Antonio kanye nedolobha laseQuepos. Kuyimizuzu engu-3-4 ukuya noma yikuphi. Ingaphezulu kwegquma elilingana kahle futhi kunokubukwa okuningana kolwandle kule ndawo. Kunesitobhi sebhasi somphakathi ngaphesheya komgwaqo esingakuletha epaki likazwelonke laseManuel Antonio kanye nolwandle olushibhile uma ungafuni ukushayela, futhi kukhona amathani ezindlu zekhofi nezindawo zokudlela ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo!
Lolu hlu olwe-villa Sea Happy. U-Sea happy yindlu enesitezi esisodwa enekamelo elilodwa lokulala kanye nesofa lokudonsa. Uma udinga ukulala okwengeziwe singathola nomatilasi ophephethekayo wegumbi lokuphumula. Kukhona umpheme ongaphandle onokubukwa okuncane kolwandle, futhi indawo inomhlaba omuhle kakhulu futhi kukhona ichibi elihlanganyelwe lazo zonke izakhiwo. Kukhona indawo yokupaka yangasese esizeni ngaphakathi komphakathi onesango.
4.92 ·87 okushiwo abanye
I-Seascape iwumphakathi omncane onamasango wezindlu ezi-4 khona kanye phakathi kwepaki yesizwe iManuel Antonio nedolobha laseQuepos. Cishe imizuzu engu-3-4 ukuya noma iyiphi imoto. Kukhona nesitobhi sebhasi emgwaqeni phambi kwendawo, futhi kukhona imibono emihle evela ezindaweni ezahlukene kule ndawo. Kukhona ichibi elihle okwabelwana ngalo esizeni ukuze izindlu zilisebenzise, futhi Kukhona umlimi wengadi otshala izithelo ezihlukahlukene endaweni (ukuze izivakashi zijabulele) futhi agcine indawo ihlanzekile. Zonke izakhiwo eziseSeascape ziyizindlu zesitayela saseCosta Rican, nazo zonke izinsiza zesimanje zendlu yesitayela saseMelika! Ukuhlala lapha kukunikeza ithuba langempela le-Costa Rica elifana ngempela, kuyilapho ujabulela ukunethezeka onakho ekhaya!
UJose Serrano ungumvikeli wendlu ye-Villa Sea Happy futhi utholakala noma nini ukuze ahlangabezane nanoma yiziphi izidingo zakho. Izivakashi eziningi zimyisa esitolo ngaphambi kokuba zifike lapha, futhi ubuye abe nokuxhumana okuningi ngemisebenzi eyahlukene endaweni. Uzohlangana nawe e-villa ngosuku lokuqala ngezihluthulelo, futhi ngokuvamile uhlola izikhathi eziningana ngesikhathi sokuhlala ukuze aqiniseke ukuthi yonke into iphelele ngokuhlala kwakho!
UJose Serrano ungumvikeli wendlu ye-Villa Sea Happy futhi utholakala noma nini ukuze ahlangabezane nanoma yiziphi izidingo zakho. Izivakashi eziningi zimyisa esitolo ngaphambi koku…
Hlola ezinye izinketho ezise- Quepos, Costa Rica namaphethelo